Puntland oo ka hadashay Dagaalkii khasaaraha geystay ee ka dhacay Galmudug | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Puntland oo ka hadashay Dagaalkii khasaaraha geystay ee ka dhacay Galmudug
Puntland oo ka hadashay Dagaalkii khasaaraha geystay ee ka dhacay Galmudug
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee maamulka Puntland Cabdifitaax Muuse Nuur ayaa ka hadlay dagaalkii u dhexeeyay Ciidanka Dowladda iyo Al-shabaab ee shalay ka dhacay deegaan hoostega Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Galmudug.
Guddoomiye Cabdifitaax Muuse oo Qoraal soo saaray ayaa waxaa uu ku boggaadiyay Ciidamada Gor-gor iyo Qaybta 21-aad ee dagaalka Al-shabaab kula galay deegaanka Tuula-xaayow oo dhinaca koonfur ka xiga Dhuusamareeb.
Guddoomiyaha ayaa tacsi u diray Askartii ku geeriyootay dagaalkii khasaaraha geystay ee ka dhacay Tuula-xaayow , isla markaana Caafimaad u rajeeyay Askarta dhaawacyada soo gaareen weerarka, kuwaasi oo la dhigay Xarun Caafimaad.
“Waxaan Bogaadin iyo Amaan ujeedinayaa Cutubyada ka tirsan Ciidamada Gor-gor iyo Qaybta 21aad ee la dagaalamay Shabaabkii rabay inay dhagarta umaleegaan Shacabka Soomaaliyeed ee adeegasada wadada isku xirta Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel kuwaas oo rabay inay miinooyin dhulka ah ugu aasaan, ilaahay Caafimaad taama ha siiyo Askartii ku dhaawacantay dagaalkaasi, askarta ku geeriyootayna ilaahay Janada ha geeyo” ayuu yiri Guddoomiye Cabdifitaax Muuse Nuur.
Saraakiisha Ciidanka qeybta 2-aad ayaa sheegay inay dagaalkii shalay dhacay ay Al-shabaab uga dileen in ka badan 10-xubnood, ayna ka qaateen hub, halka Al-shabaab ay sheegeen inay Ciidanka dowladda ka dileen 7 Askari oo uu ku jiray Sarkaal, kuwo kalena ay dhaawac u geysteen.
Maqaal horeXubno ka tirsan Dowladda iyo M/Goboleedyada oo gaaray Garoowe
Maqaal XigaDowladda iyo xubno ka tirsan M/Goboleedyada oo Maanta Shir u furmay